संसारको सब भन्दा उत्तम पुस्तक, के यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ? | वर्तमान साहित्य
संसारमा सब भन्दा राम्रो पुस्तक के हो? हुनसक्छ कुनै धार्मिक चिकित्सकका लागि यसको स्पष्ट उत्तर बाइबल, तोरह वा कुरान हो। यद्यपि तिनीहरू सँधै वैधताका पाठहरू हुन् र राम्ररी बताइएको विवरणहरूले भरिएका छन्, तिनीहरू मध्ये केवल एउटाको छनोटले ईश्वरशास्त्रीय बहस (अनावश्यक) उत्पन्न गर्दछ। तसर्थ - कडाई साहित्यिक विश्लेषण को दृष्टिकोण बाट - तिनीहरू यस्तो भेद लागि उम्मेदवार हुन सक्दैन।
त्यसै गरी, सबै मानवताको "नम्बर एक" को रूप मा एक पाठ माथि उठाउनु एक विषय हो - पक्कै - व्यक्तिपरक। (जब सम्म यो सांख्यिकीय मामिला को मामला हो, उदाहरण को लागी: प्रतिलिपिहरु को संख्या बेचेको)। यी कारणहरु को लागी, यस लेखमा, धेरै शीर्षक आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व र विश्वव्यापी साहित्य भित्र प्रासंगिकताको आधारमा प्रस्तावित छन्।
1 डोन Quixote डे ला मंचा (१1605०XNUMX), मिगुएल डे सर्भेन्टेस द्वारा
1.1 लेखकको जीवनी संश्लेषण
1.2 कामको प्रासंगिकता
1.3 डन Quixote के बारे मा छ?
2 दिव्य कमेडी (१1304०1321 र १XNUMX२१), डन्टे एलिघेरी द्वारा
2.1 दन्ते, असाधारण कवि
2.2 द दिव्य कमेडीको विरासत
2.3 कामको बारेमा
3 ह्यामलेट (१1601०१) विलियम शेक्सपियरद्वारा
3.1 छोटकरीमा, शेक्सपियरको जीवन
3.2 ह्यामलेटको प्रभाव
3.3 यस त्रासदीको सारांश
4 अन्य विश्वव्यापी पुस्तकहरू
ला मानचा डन क्विजोट (१1605०५), मिगुएल डी Cervantes द्वारा
लेखकको जीवनी संश्लेषण
Cervantes उनी १ 1547 मा स्पेनको अल्का डे हेनार्समा जन्मेका थिए। सानै उमेरदेखि नै उनले कविताको शुरूआत गर्दै साहित्यमा चासो देखाए। पछि, इटालीको प्रख्यात यात्रामा उनले केहि कवितात्मक कविता पढेका थिए जुन पछिल्लो रचनालाई प्रभावित गर्थे Quixote. लेखकले इसाई सेनामा लेपान्टोको युद्धमा पनि काम गरे, यो तथ्यले उनको कलमलाई पनि उत्प्रेरित ग .्यो।
स्पेन फर्केपछि १ 1575 मा अल्जीयर्समा पक्राउ गरिएको थियो। उहाँ कैदमा पर्नुपर्दा उहाँ सबै प्रकारका अनियन्त्रित घटनाहरू भोग्नुभयो। रिहाई पछि, उनले आफूलाई विभिन्न ट्रेडहरुमा समर्पित गरे र लेखे Galatea, आफ्नो पहिलो प्रमुख काम। पछि, १ 1597 XNUMX in मा फेरि कैद गरिएको थियो।
त्यो दोस्रो कारावासमा सर्भेन्टेसले गर्भधारण गर्‍यो Quixote, उहाँको मास्टर ओपेरा। उनी म्याड्रिडमा died of वर्षको उमेरमा मरे।
ला मन्चको चतुर जेंटलमैन डॉन क्विजोट, जसको पहिलो भाग १ 1605०XNUMX मा प्रकाशित भएको थियो, मानिन्छ आधुनिक उपन्यासको अग्रणी कार्य। यो जोखिमपूर्ण र उपन्यास ईन्टर्टेक्चुअल संरचनाको कारण हो, त्यसमा कथाहरू, "उपन्यासहरू" र केन्द्रीय प्लट भित्र अन्य विधाहरूको समावेश थियो।
त्यस्तै गरी, ला मानचा डन क्विजोट स्पेनिश भाषाको समेकनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर गठन गर्दछ; त्यो एउटा नवजात राष्ट्रको भाषा हो। पन्ध्रौं शताब्दीमा स्पेनका राजाहरूले मुस्लिमहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाले र अमेरिका पत्ता लगाए भन्ने तथ्यले गर्दा डॉन क्विजोटलाई पछि कास्टिलियनको मुख्य साहित्यिक व्यक्तिको रूपमा सेवा गर्न सजिलो भयो।
डन Quixote के बारे मा छ?
ला मन्चाको हिडाल्गो चावलिक उपन्यासहरू यति धेरै पागल भए कि त्यसले आफूलाई नाइट ईरन्टको रूपमा सशस्त्र बनाउँछ।यद्यपि त्यस्ता कार्यालय हराइसकेका थिए। यसैले, Alonso Quijano डन Quixote हुन्छ र दुई "छिमेकी" परिवर्तन गर्दछ। एउटा उसको स्क्वायर an सान्को पानजा— र अर्को उसको नोकर्नी - अल्ल्डोन्जा लोरेन्जोले बनाएका थिए जसलाई उनले डुल्सिने डेल टोबोसो हुर्काए।
यस तरिकाले, नाइट र उसको स्क्वायर धार्मिक कार्यहरूको खोजीमा बाहिर निस्के ताकि "उसको" डुलसिनियाले डन क्विक्सोटको मूल्य सिक्न सक्दछ। त्यसैले, सबै प्रकारका पागल चीजहरूमा टिप्पणी गर्नुहोस्, उपहास र अस्वीकृति कमाउनुहोस्, तर परिवार र साथीहरू द्वारा उद्धार नभएसम्म भ्रामक कारणहरूमा जोड दिनुहोस्। अन्त्यमा, उसलाई घरमा लगियो, उसले बुझ्छ कि के भयो उसको दिमागमा उदायो, ऊ उदास हुन्छ र मर्छ।
La Mancha को डॉन Quizote ...
दिव्य कमेडी (१३०४ र १३२१), Dante Alighieri द्वारा
दन्ते, असाधारण कवि
अहिलेको सबैभन्दा महान इटालियन कवि मानिन्छ, डन्टे १२ born1265 मा फ्लोरेन्समा जन्मेका थिए। उनको बाल्यकालमा बीट्रिस नाम गरेकी केटीले आफ्नो कमेडीको नायकलाई प्रेरणा दिईन्। एक जवान मानिस को रूप मा, उनले आफ्नो शक्तिशाली स्मृति, साथै आफ्नो चित्रकला को मान्यताहरु। उनले सांगीतिक कला र हतियारहरूलाई सम्बोधन गरे।
त्यस्तै गरी, बिट्राइजको मृत्युबाट प्रेरणा पाएर, उनको असम्भव प्रेमले, लेख्यो वीटा नुवा। पछि, डेन्टेले ल्याटिन क्लासिक्स र दर्शनको अध्ययन गरे, विवाह गरे र राजनीतिमा लाग्न थाले। पछि उनलाई निर्वासनको सजाय सुनाइयो र १ 1302०२ मा, यदि उनी फ्लोरेन्समा फर्के भने उनलाई जिउँदै जलाइनेछ। यस कारणले गर्दा उसले इटालीका सहरहरूमा भौंतारिएको जीवन शुरू गर्‍यो, रभेन्नामा बसोबास गर्ने ठाउँमा, जहाँ उनको सेप्टेम्बर १,, १14२१ मा मृत्यु भयो।
विरासतको La दिव्य हास्य
साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत जस्ता कलाहरूमा यसको प्रभाव र पश्चिममा आउँदै गरेको लोकप्रिय संस्कृतिमा पनि निस्सन्देह।। छोटो अवधि मा हामी रोमान्टिकवाद मा यो टुक्रा को वंश को बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। त्यस्तै, चित्रण र चित्रकलामा, डोरीबाट ब्लेक सम्म; संगीत मा, फ्र्याz्क Liszt; मूर्तिकलामा, अगस्टे रोडिन ...
थप रूपमा, डेन्टेस्क कमेडीको ठूलो मूल्य यसको सार्वभौमिक चरित्रमा छ र यसको शताब्दी पछि सात शताब्दी पछि। यस सन्दर्भमा, टीएस इलियटले भने कि "सोच अन्धकार हुन सक्छ, तर शब्द आकर्षक छ" ... त्यसैले यसको पहुँचयोग्य पठन हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो एक टुक्रा हो जुन कविता वा गद्यमा पढ्न सकिन्छ, विशेष सार्वजनिक वा विवेकी तुलनाले पूर्ण।
दिव्य कमेडी यो इटालियन भाषामा तीन कविताहरुमा विभाजित कविता हो: नरक, पर्गरेटरी र प्याराडाइज, कुल १,,14.333 हेन्डेकासिनेबल पदहरू सहित। यसले कवि दन्तेको यात्रालाई वर्णन गर्दछ, वर्जिलको कम्पनीमा, भूमिगत भएर पहिलो दुई भागहरूको समयमा। पछि, आफ्नो प्यारो बिट्रियाजसँगै, उनले तेस्रो भाग, प्रमोदवनको भ्रमण गरे।
दन्तेले पहिलो पटक नरकको माध्यमबाट आफ्नो यात्राको बारेमा बताउँछन् र वर्णहरूलाई आफ्नो पहिलो शिक्षकको रूपमा वर्णन गर्दछ। तुरुन्तै, तिनीहरू Purgtory जान्छन्, भगवानले क्षमा गरेका आत्माहरूको शुद्धिकरणको ठाउँ। पछिल्लो, नायकले भर्जिलियोलाई बिट्राइजसँग स्वर्गमा छोडेर जान्छ। त्यहाँ, प्रकाश र सुन्दर गीतहरूले घेरेको उहाँ पवित्र त्रिएकको उपस्थितिमा एक्स्टेसीमा पुग्नुहुन्छ।
दिव्य हास्य (१//२०)
Hamlet (१1601०१), विलियम शेक्सपियर द्वारा
छोटकरीमा, शेक्सपियरको जीवन
अप्रिल १ 1564 मा इ England्गल्यान्डमा जन्म, विलियम शेक्सपियर विश्व साहित्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लेखक मानिन्छ। जे होस्, उसको बाल्यकाल र जवानीको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छउनी एक क्याथोलिक परिवारका एक स्थानीय व्यापारी र राजनीतिज्ञका छोरा थिए भन्ने तथ्यलाई बाहेक। यस्तै प्रकारले, यो प्रख्यात छ कि एक अभिनेता र नाटक लेखकको रूपमा उनको काम १ began। ० मा लन्डन प्रस्थान गर्दा सुरु भयो।
युवावस्थामा उनले लर्ड चेम्बरलेनको मेन थिएटर कम्पनीमा काम गर्न थाले; त्यहाँ उनी एक सह-मालिकको रूपमा समाप्त भए (र उनको लोकप्रियता बढ्यो)। यसमा थपियो, शेक्सपियरले उत्कृष्ट कविता लेखेका थिए, तर उनको दुखद कथाहरूको लागि सबैभन्दा बढी परिचित थियो (Hamlet o Macbethउदाहरणका लागि)। अप्रिल २,, १ 23१। मा उनको मृत्यु भयो।
को प्रभाव Hamlet
यो अतिशयोक्ति बिना भन्न सकिन्छ कि सम्पूर्ण शेक्सपियर थिएटर पछिका साहित्यहरूमा निर्णायक छ। (अहिले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ)। त्यसकारण, यो निर्धारण गर्न गाह्रो छ कि छैन Hamlet यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ Macbeth के रोमियो वाई जूलिया। यद्यपि, मा Hamlet तपाईंसँग सबै शेक्सपेरियन सिर्जनाको वास्तविक प्रतिनिधि अंश छ।
यसका लागि Hamlet विश्वव्यापी सामूहिक कल्पनाको विशेष महत्त्वलाई विभिन्न भाषाहरू र संस्कृतिहरूमा हाइलाइट गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि। यसमा थपिएको छ, वास्तवमा मानव चरित्रहरू सिर्जना गर्न एक अपूर्व प्रतिभा जहाँ पाठकले पहिचान गर्न सक्दछ। साथै, लेखकको अद्वितीय तकनीकी र शैलीगत सम्पत्ती हाइलाइट गर्न आवश्यक छ, आजको पुस्ताको लागि सन्दर्भ हो.
यस त्रासदीको सारांश
डेनमार्कको एल्सिनोरमा, राजा बित्नुभयो। फलस्वरूप, उनको भाइ क्लाउडियोले रानी, ​​गेर्ट्रुडसँग विवाह गरे, जबकि राजकुमार विचलित भएको देखिन्थ्यो। अरु के छ त, फोर्टिम्ब्रसको कमान्डमा नर्वेले आक्रमण गर्ने खतरा सामूहिक त्रासदीको ठूलो पृष्ठभूमिको रूपमा देखा पर्दछ। त्यसोभए, राजाको भूतले ह्यामलेटलाई प्रकट गर्छ कि उसको भाइले उसको हत्या गरेको थियो र बदला लिनको लागि भन्यो।
त्यसपश्चात क्रोधले नायकको न्यायलाई पूर्ण रूपमा बादलमा पुर्‍याउँछ, जसले गल्तीले पोलोनिओलाई मार्छ र लाउर्टेससँगको झगडाको सामना गर्दछ (क्लाउडियोको षडयन्त्रले)। निन्दामा, रानीले दुर्घटनावश विष पिउँछिन्, जबकि ह्याम्लेट र लाएर्ट्स विषालु तरवारबाट खसे।। यद्यपि राजकुमार मर्नु अघि आफ्नो बदला खान्छ।
अन्य विश्वव्यापी पुस्तकहरू
- अपराध र सजाय (१1866), फ्योडर दोस्तोएवस्की द्वारा
- दयनीयहरु (१1862२), भेक्टर ह्यूगो द्वारा
- शोभाजोहान गोएथे द्वारा
- पङ्क्तिको प्रभु (१ 1954 XNUMX), जेआरआर टोलकिएन
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » संसारको सबै भन्दा राम्रो पुस्तक
शुभ दिउँसो। ईश्वरशास्त्री र The औं विद्यार्थीको रूपमा, कुनै पनि बहस मलाई अनावश्यक लाग्दैन, र यो ईश्वरतान्त्रिक हो भने पनि कम, तर यदि यो सत्य हो भने, सबैभन्दा राम्रो किताब कुन हो भनेर जान्न धेरै गाह्रो छ, निर्विवाद रूपमा, यदि सबैभन्दा पढिएको हो भने सबै भन्दा राम्रोसँग बुझ्ने हो भने यो बाइबल र समयावधि हो।
ती सबै उल्लेखित उत्कृष्ट छन् र म "The हजार र एक रातहरु" लाई जोड्न चाहन्छु।
अलेजेन्ड्रो टोरेस डियाज भन्यो
डॉन Quixote Cervantes द्वारा लेखिएको थियो भनेर पर्याप्त पर्याप्त!
उसले केवल यो प्रकाशित गर्‍यो, अरू केहि छैन
Alejandro Torres Díaz लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं सहि हुनुहुन्छ तर केवल अंशमा, मूल विचार उहाँको होइन, मूल एक अरबको बारेमा थियो (उसको नाम क्व्याट थियो, माफ गर्नुहोस् यदि मैले यो राम्रोसँग लेखेको छैन भने) जो मरुभूमिमा हराएको थियो र यो तिर्खा थियो (र पुस्तकहरू होइन। ) जसले उसको टाउको गुमायो र एलोन्सो क्विजानो जस्ता उनले आफूले देखेका सबै चीजहरू गोलमाल गरे जसले उसलाई आक्रमण गर्थ्यो र यस्तै अन्य चीजहरू ... ध्यान दिनुहोस् कि उनी (सर्भेन्टेस) कहिल्यै लुकाएनन् कि यो विचार उनको थिएन, यो पछि थियो, तपाईलाई थाहा छ, पी ... पैसा, कि उनीहरूले यसलाई उनीहरूको रूपमा पूर्ण रूपमा गराउन चाहेका थिए। अर्को पढ्न सक्षम नभए पनि, म डन क्विटोटसँग बस्छु, यो मलाई अधिक लाग्छ ... मलाई थाहा छैन, फरक ... मलाई माफ गर्नुहोस्, म अल्कालाबाट हुँ र उही म हुँ। ' म वस्तुनिष्ठ होइन। अभिवादन
हर्नान्डो भारेला भन्यो
नमस्कार सबै महान कार्यहरू हुन् जसले माइलस्टोनहरू चिह्न लगाएको छ र भाषालाई केहि केसहरूमा परिमार्जन गरिएको छ ... विश्वको सबै भन्दा राम्रो पुस्तकको शीर्षक? मलाई यो जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ धेरै हराइरहेका छन् कि सूची अनन्त हुनेछ। बोर्जेस, हेसे, गोएट, जोइस, र हजारौं थप ... बधाई छ र यदि भगवानले तपाईंलाई आशीर्वाद दिनुभएन भने केही पनि नहोस् भनेर चिन्ता नलिनुहोस्।
Hernando Varela लाई जवाफ दिनुहोस्
Euclid को तत्व, प्रिन्सिपिया गणित